Guryaha aadka u liidata: maxkamad ku taal Faransiiska ee adeerkiis oo ah madaxweynaha Bashar al-Assad - TELES RELAY
ACCUEIL » International »Xaalad aad u liidata: maxkamad ku taal Faransiiska oo adeer u ah adeerkiis Bashar al-Assad
Faransiiska, garsooraha maxkamada Paris Renaud Van Ruymbeke ayaa waxaa loola jeedaa maxkamada dembiyada Rifaat el-Assad. Adeerkiis Bashar al-Assad ayaa lagu xukumi doonaa lacag lagu dhaqo lacago sharci-darro ah oo khiyaano ah oo la xidhiidha musuq-maasuqa iyo kharribaadda lacagaha dawladda Suuriya. Waxa lagu tuhunsan yahay inuu khiyaano ahaan u dhisay Faransiiska hantida maguurtada ah ee lagu qiimeeyay 90 million euros.
Ilaa hadda, caddaaladda Faransiisku waxay qabteen laba qol, afartan guri, hara iyo qalab. Spain, wax ka badan 500 alaab qiimo leh oo dhowr boqol oo milyan oo euros ah ayaa sidoo kale la qabtay.
Rifaat al-Assad ayaa had iyo goorba ilaalinayay ka hor baadhayaashii in hantidiisa ay ka timid boqortooyada Sacuudiga. Weligeed ma awoodo inuu caddeeyo. Xubin hore oo ka tirsan xukuumadda Suuriya, ayaa lagu qasbay inuu xabsiga ka sii daayo 1984 ka dib markii uu kufaraxsanaa walaalkiis, madaxweynihii hore ee Syria, Hafez al-Assad.
Markii uu ku yimid Yurub, wuxuu u dhigay waqti rikoodh iyo gaar ahaan Faransiiska, hanti magaalo oo cajiib ah. Ilaa inta cadaalada la raacayo cabashada cabashada Sherpa oo la dagaallanka musuqmaasuqa, ma furo macluumaadka garsoorka shan sano ka hor.
Tan iyo markii uu ku eedeeyay 2016, Rifaat el-Assad, sanadaha 81 waxaa lagu qaadaa dib-u-eegis garsoor oo xakameynaya dhaqdhaqaaqiisa adduunka.
Maxkamadiisu waxay noqon doontaa garsoore labaad oo loogu talagalay hantida aan laga helin Faransiiska, kadib laba sano ka hor madaxweyne kuxigeenka hadda ee Equatorial Guinea.
Halkan waxa laga soo xigtay: http://www.rfi.fr/france/20190417-proces-oncle-assad-biens-mal-acquis-france
Kanada - Kanada: Sannad-kaani-gacmeed, xirfad horumarineed
Tani waa sida Faransiiska Afrika ay ujoogaan kali-taliyayaasha Afrikaanka ah - CAMEROON MAGAZINE